မောင်တောဒေသတွင် တည်ဆောက်နေသည့် ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းများနှင့် ကျေးရွာများကို ပြည်ထောင်စု - Yangon Media Group
မောင်တောဒေသတွင် တည်ဆောက်နေသည့် ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းများနှင့် ကျေးရွာများကို ပြည်ထောင်စု
ရခိုင် ပြည်နယ်၊ မောင်တောဒေသတွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့်ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းများနှင့် ကျေးရွာများကို ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများနှင့်အဖွဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်က သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် အဖွဲ့သည် မြိုတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရန် ပြန်လည်နေရာချထား ပေးမည့် သစ်တုံးနားဂွဆုံကျေးရွာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးမည့် အိုးထိန်း ကျေးရွာတို့တွင် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့တိမ်းရှောင်သွားသူများ ရေလမ်းခရီးမှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါက လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် စခန်းတည်ဆောက်မည့် ငါးခူရကျေးရွာတွင်လူနေ အဆောက်အအုံများတည်ဆောက် နေမှု၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်နေမှုနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများရောက်ရှိ နေမှုအခြေအနေများကို ကြည့်ရှုခဲ့ ပြီးဒေသခံမြိုတိုင်းရင်းသားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း ကာ နေအိမ်များကို အရည်အသွေး ပြည့်မီစွာဖြင့် အမြန်ဆုံးဆောက် လုပ်ပေးနိုင်ရေးတို့ကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Construction and Infrastructure Task Force) ၏ နာယကဦးကျောက်တောင်က ”လက်ရှိတောင်ပြိုလက်ဝဲရဲ့တည် ဆောက်မှုက ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ ရက်အတွင်းမှာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပြီးစီးသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အိုးထိန်းဆိုတဲ့ရွာမှာနေ အိမ်အလုံး ၁ဝဝ ဆောက်နေပါတယ်။ လှဖိုးခေါင်ကျေးရွာကတော့ ထပ်တိုးဆောက်လုပ်မယ့်နေရာပါ။နေအိမ် ၆၂၅ လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဒေသခံကုမ္ပဏီ ၄ဝ ကို တင်ဒါ စနစ်နဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ တည် ဆောက်မှုကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ယင်းသို့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် ဒေသခံကုမ္ပဏီများကို ဦးစားပေး၍လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဦးကျောက်တောင်က”လက်ရှိလုပ်ငန်းအဖွဲ့က ရခိုင်မြောက် ပိုင်းဒေသမှာ ပြန်လည်ထူထောင်မယ့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အဓိကဒေသခံကုမ္ပဏီတွေကို ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ စစ်တွေဘက်ကကုမ္ပဏီတွေကို ဦးစားပေးမယ်။ ဒီထက်မက အလုပ်တွေများလာရင်အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းဘက်က ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာမှာပါ။ မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ကကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောက်ခံနေသည့် ကုမ္ပဏီ အမြတ်ခွန်သည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအနက် အမြင့်ဆုံးဖြ
ရှစ်လေးလုံး ဦးကိုကိုကြီး နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် ကြာမှ ဘွဲ့ရရှိ
၂ဝ၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကျင်းပမည့် စာစစ်ဌာန ၁၈ဝဝ ကျော်တွင် တာဝန်ယူရမည့် ကြီးကြပ်ရေးမ?
ထပ်မရနိုင်တော့သည့်အခွင့်အရေးကို အရယူရန် ဆောက်ဂိတ်တိုက်တွန်း ၊ မီးဖွားမည့်ဇနီးကြောင့် အင်္ဂ?
တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ငွေအတုများကို ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် အပ်နှံခြင်း မှန်ကန်ပါက မနော်သော့သွဲ့